Desktop ပေါ်က Wallapaper ကို ပိတ်ချင်လို့ပါ — MYSTERY ZILLION
Desktop ပေါ်က Wallapaper ကို ပိတ်ချင်လို့ပါ
April 2009 edited October 2009 in Help Desk
ဒီလိုဗျာ ကျွန်တော် computer မှာ ကျွန်တော့ ညီက desktop ပေါ်မှာ ပုံကို တစ်ပုံပြီးတစ်ပုံ လာတင်တင်ဆော့နေတယ်ကွယ် မျက်စီအရမ်းရှုပ်တာပဲ ကျွန်တော်နေ့တိုင်းကို ပြန်ပြင်ထားရတယ်။ မောလှပြီးဗျာ။ အဲဒါကို ဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ၊ ပြီးတော့ Set as desktop backgroud ဆိုတာကိုလည်း ပိတ်ချင်ပါတယ် ကူညီဖြေရှင်းပေးပါအုံးလို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်
ညီလေးအတွက် new account လုပ်ပေးထားလိုက်ပေါ့ .. သူ့ desktop ကိုသူ ပြောင်းချင်တာပြောင်းစေလိုက်တာက ပိုပြီးကောင်းမလားလို့ .. ကိုယ့်အတွက်လဲကောင်း သူ့အတွက်လဲအဆင်ပြေတာပေါ့
Windows XP သုံးတယ်ထင်လို့ Windows XP အတွက်နည်းပဲ ရေးလိုက်ပါတယ် ..
Start > Run > Type "gpedit.msc" >
Locateasetting named "Prevent Changing Wallpaper". Double click to open it.
ကျွန်တော်ကတော့သူများတွေကိုယ်တင်ထားတဲ့ background ကိုမပြောင်းစေချင်ရင်...
win+r(run box) вЂњgpedit.mscвЂќ ရိုက်ပြီး Local Computer Policy==>User Configuration==>Administrative Templates==>Desktop==>Active Desktop အဲဒီအဆင့်အထိရောက်ရင် ညာဘက်မှာ Active Desktop Wallpaper ဆိုတာကို double click ပြီး enable နှိပ်ရင် အလယ်က box လေးလင်းလာမယ် Wallpaper Name ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကိုယ့်ထည့်ချင်တဲ့ပုံလမ်းကြောင်းကိုရွေးပေးလိုက်ရုံပဲဗျ။ ပုံလေးပါတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
desktop background က အစ desktop ပေါ်မှာ ရှိတဲ့ icon တွေအဆုံးတခုမှ ပြောင်းလို့မရတဲ့ software ရှိပါတယ်..ကျွန်တော်အရင်က သုံးဖူးတယ်ဗျ...သုံးပြီးနောက် ပြောင်းချင်လို့ပြန်ဖျက်တာ ဘယ်လိုမှ ဖျက်လို့ရတော့ဘူး သူက desktop ပေါ်မှာ right click ကို မပေးတော့တာဗျ...:( အကောင်းဆုံးကတော့ box ပြောသလို new account ပေးထားလိုက်ပေါ့..ကိုယ့်အကောင့်ကို password ပေးထားလိုက်ရင်ကောင်းတယ်...ပြီးတော့ ကိုယ့်ဖိုင်တွေကို စိတ်မချရင် သူ့ကို guest account ပဲပေးလိုက်ပေါ့... administer ကိုတော့ကိုယ်ပဲကိုင်ထားနော်...:D
Dude !! Ko Ko Nya ... your way is better and reli work .. gr8 ...
Ok သွားပါပြီဗျာ။ အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ IT ကမ္ဘာမှာ ဖွ့ံဖြိုးတိုးတက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်
IE နဲ့ Firefox ရဲ့ R Click မှာပေါ်တဲ့ set as desktop background ကြောင့်ပါ :106:
ကျွန်တော်က internet cafe ဆိုင်ဖွင့်ထားတာပါ
ကို zawmio ရေ အပေါ်မှာ ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အတိုင်းလုပ်ရင် ချိန်းလို့မရတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော်အခုလေးတင်စမ်းသပ်ပြီးပါပြီ။
ညလေးပြောတာ အဆင်ပြေပါတယ်။ Picture ကို Right Click နှိပ်ပြီး Setup Background လုပ်လဲ မရတော့ပါဘူး။
ကျေးဇူးတင်ပါ ကို ညမီးအိမ် ခင်ဗျား။ တော်တော်ကိုအုန်းစားသွားတာဗျ။:102:
ကိုညမီးအိမ်ပြောတာက desktop ပေါ်ပုံတစ်ပုံတော့တင်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်လိုချင်တာက desktop ပေါ်မှာ none ထားချင်တာပါ(ဘာပုံမှကိုမထားချင်တာပါ)
ဘာပုံမှမတင်ထားချင်ရင် background ပုံကို mspaint နဲ ့create လုပ်လိုက်ပါလား ဥပမာ ကိုယ်က background အဖြူလိုချင်ရင် mspaint မှာ အဖြူအနေနဲ့save လုပ်ပြီးမှ အဲဒီ file ကိုပြန်ညွန်းလိုက်ပေါ့
ကျွန်တော် လည်း နေ့မီးအိမ် ရဲ့ :Pနည်းလေး နဲ့ အဆင်ပြေသွားပါတယ်ဗျာ.. ကျေးဇူးတင်တယ်နော်.. အခုလို ပြန်လည် မျှေ၀ပေး ကြတဲ့ အတွက်ပါ....desktop ပေါ်က ပုံ ကိုဘယ်သူမှ..ပြန်ပြောင်းလို့မရတော့ဘူး.... နည်းသိလည်းပြောင်းမရတော့ဘူး.. ဆိုင်ကစက်တွေက.. Limit တွေ ပေးထားလို့လေ........:D:D